Top 10 uzo ozo ka ihichapụ dọkịta na-enye ọbụna mma arụmọrụ
Ị na-agbalị ka ihichapụ ụfọdụ faịlụ na-siri ike ihichapụ? Anyị niile na-abịa gafee dị otú ahụ ndapụta na mgbe-eche ihe mere ndị a faịlụ adịghị na-ehichapụ! Ukwuu n'ime ya na rụrụ arụ faịlụ aha, ndị a faịlụ na-adịkarị hapụrụ site nje virus na-na-atụle-emerụ maka kọmputa gị. N'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa ka ị na-nkasi nke ndị a faịlụ ka ha nwere ike egbochi arụmọrụ nke gị na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-eche ihu a yiri nke ahụ anya dịghị ihe ọzọ dị ka Nhichapụ dọkịta bụ ebe a n'ihi na gị nnapụta!
E nwere ọnụ ọgụgụ nke utilities dị na ahịa ga-enyere gị na faịlụ nhichapụ ma ihichapụ dọkịta bụ a bit dị iche iche site na ndị a mgbe nile utilities. Hichapụ dọkịta bụ onye na naanị faịlụ nhichapụ mmekọ na-ga-enyere gị aka tufuo nke faịlụ na ndị dị nnọọ adịghị njikere ịhapụ gị na kọmputa. E wezụga na-emerụ faịlụ, ihichapụ dọkịta na-emekwa ka n'aka na index.dat faịlụ na-ehichapụ nke echekwa internet akụkọ ihe mere eme. Ndị a index faịlụ na-ndokwa maka nhichapụ oge ọ bụla gị na kọmputa akpụkpọ ụkwụ elu.
File nhichapụ na Nhichapụ dọkịta bụ nnọọ mfe ya ọrụ enyi na enyi interface. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ịhọrọ faịlụ na ị chọrọ ka ihichapụ na họrọ usoro site na nke nhichapụ ga-rụrụ.
Hichapụ dọkịta na-enye ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị uru ka ya ọrụ gụnyere arụmọrụ agbam ume na ịlụ Bibie enweghị isi emerụ faịlụ. Nanị mwepu nke Nhichapụ dọkịta bụ na o nwere ike ịbụ na-ewe oge usoro maka mmadụ ole na ole nke bụ otu n'ime ndị isi mere ndị mmadụ ji na-mgbe na-achọ ya ọzọ.
Top 10 ọzọ na mmemme iji Hichapụ Doctor
Achọ ụfọdụ ezi uzo ozo ka Hichapụ Doctor? Ọfọn ebe a bụ obere ndepụta nke software utilities na ị nwere ike iwunye na kọmputa gị ka ihichapụ achọghị faịlụ.
1. File ogbu: File ogbu bụ mgbochi malware ịba uru software na specializes na nhichapụ nke ekpochi faịlụ. Na-arụ ọrụ nke a na ịba uru na-agụnye Ịkpọghe faịlụ ahụ na mbụ mmechi niile yiri Filiks na e mmasị na ya. Mgbe Filiks e mechiri emechi, ọ nwere ike ihichapụ unlocked faịlụ ngwa ngwa na conveniently. Na a fim nke 4.5, ọ bụ maa otu nke kasị mma faịlụ ihichapụ ịba uru software n'ihi na windo na-arụ ọrụ na XP na n'elu.
2. LockHunter: Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-njehie a ozi: "The faịlụ ị na-agbalị ka ihichapụ a na-eji ndị ọzọ na usoro". N'agbanyeghị otú ike ị na-agbalị emechi niile na-agba ọsọ omume, nke a na ozi ka popping elu oge ọ bụla ị pịa Nhichapụ bọtịnụ. Tụlee agbalị LockHunter bụrụ na ị chọrọ iji tufuo nsogbu a. LockHunter-egosi na ị niile Filiks na na-eji faịlụ na ị na-agbalị iji wuchaa. Ọ na-enye gị ohere iji nyegharịa, Detuo ma ọ naghachi faịlụ na i accidently ehichapụ. The software-arụ ọrụ na Windows n'elu ikpo okwu na niile nsụgharị n'elu 2000 na a fim nke 4.2-eme ka ọ uru na-agbalị.
3. IObit unlocker: Dị ka aha-atụ aro, na IObit unlocker bụ a ịba uru dị nnọọ ka Ịkpọghe faịlụ, nchekwa na nyegharịa, idetuo ma ọ bụ ịkpali chọrọ faịlụ-akpaghị aka. A onye ọrụ nwere ike mfe ịgbanwe n'etiti amanye mode na ụkpụrụ mode n'ihi na mma ịrụ ọrụ. Nke a software dị maka Windows n'elu ikpo okwu na-agba ọsọ na XP na n'elu nsụgharị. The ọrụ nyere ya a fim nke 4.6 nke 5.
4. BlitzBlank: nchegbu banyere obi na-emerụ faịlụ na kọmputa gị na ị na-enweghị ka ihichapụ? BlitzBlank bụ otu n'ime ndị kasị bara uru ịba uru software na ga-hụ nhichapụ nke niile obi faịlụ na ihe siri oké ike n'ihi na ị ka ihichapụ tupu! E Nwere n'ihi na ma 32-bit na 64-bit version nke Windows, BlitzBlank bụ dakọtara na fọrọ nke nta niile nsụgharị nke Windows n'elu XP. The software na-egosi ya ruru eru site na-a fim nke 4.6 nke 5.
5. n'akpa uwe KillBox: A obere ma ukwuu bara uru software ịba uru, n'akpa uwe KillBox enye ya ọrụ na a mfe interface na a ọkọlọtọ usoro nke ihichapụ ndị "ike ihichapụ" faịlụ. Ihe niile ị chọrọ ime bụ nnọọ dobe na faịlụ na ị na-enweghị ka ihichapụ ma họrọ a usoro iji ihichapụ ya. Dakọtara na Windows XP na elu nsụgharị, n'akpa uwe KillBox bụ uru ịwụnye. A fim nke 4.8 nke 5 di arụmọrụ nke a obere software.
6. mkpọchi-UnMatic: mkpọchi-UnMatic bụ a bara uru nke ukwuu faịlụ ihichapụ ịba uru software na ngwa ngwa na-egosiputa otu nnyocha nke niile Filiks interrupting nhichapụ nke faịlụ. Ozugbo onye ọrụ na-egbu ndị a Filiks, ha nwere ike mfe ihichapụ faịlụ. Dakọtara na Mac sistemụ, a software bụ free iji wụnye. A ọrụ fim nke 4.6 nke 5 na-eme ka Ọ bara uru na-agbalị!
7. ahịhịa Ọ Inwe nsogbu nsị gị ahịhịa? Ọfọn e nwere ike ịbụ mbipụta ihichapụ faịlụ na ahịhịa ruru ji akpọchi. N'ebemkpofuozi Ọ bụ pụrụ iche ịba uru software na unlocks faịlụ ma si otú-enyere onye ọrụ efu ha ahịhịa mfe. Dakọtara na Mac sistemụ, ị nwere ike ma ka software eme ya ọrụ na-akpaghị aka ma ọ bụ hichapụ ihe aka. Na a fim nke 4.5, ọ maa nwere na-na gị na ndepụta nke kasị mma faịlụ-Nhichapụ mmekọ.
8.-adịgide Adịgide nchicha: Utility software na deletes faịlụ ntukwasi-obi, ọ na-ewe nanị ole na ole sekọnd maka echichi nke software. Otu oru oma na-arụ ọrụ, tinyere ọrụ enyi na enyi interface,-adịgide Adịgide nchicha maka Mac bụ maa otu nke kasị mma ịba uru software maka n'elu ikpo okwu.
9. iXoft FolderWasher: N'ihi na họrọ nchekwa, FolderWasher deletes niile faịlụ na-amalite na a oge. The Mac OS site nwa oge faịlụ malite na a oge na a na ịba uru software ana achi achi na nile dị otú ahụ faịlụ na-ehichapụ ngwa ngwa.
10. MacKeeper Shredder: MacKeeper Shredder-enye ohere ọrụ ka ihichapụ faịlụ na ndị siri ike ihichapụ. Ọ dị mfe iji na-ezere overwriting nke faịlụ ọtụtụ ugboro na disk.
Mberede nhichapụ na mgbake
Ọ bụ na unu accidently ihichapụ faịlụ na ị na-adịghị kwesŽrŽ? Ọfọn, ị na-adịghị ka nchegbu banyere mberede nhichapụ nke faịlụ ọzọ! Na Wondershare data mgbake, ị nwere ike naghachi ihe ọ bụla na ihe niile! Ị nwere ike ọ bụghị naanị naghachi faịlụ, foto na vidiyo ma Wondershare na-enyere na-agbake gị ozi ịntanetị. The software akwado a ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ tinyere egweri biini, flash draịva, diski ike wdg
E nwere ọtụtụ ndapụta ebe ị ihichapụ faịlụ na-adịgide adịgide dị ka ịpị "mgbanwe + del" na-enweghị a ndabere. The Wondershare mgbake ngwá ọrụ na-abịa n'ime play ke kpukpru ndapụta. The ngwá ọrụ na-akwado ma "mma mgbake" na "zuru ezu mgbake." Mgbe Nchekwa mgbake agbali naghachi gị data n'emebighị ya, zuru ezu mgbake mgbalị na-achọta gị furu efu faịlụ na partitions.
Olee otú iji Wondershare mgbake ngwá ọrụ?
Nzọụkwụ 1: Họrọ mgbake mode
Nzọụkwụ 2: Iṅomi na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3: Naghachi / ịhụchalụ na zọpụta faịlụ
Mmechi: ezie Nhichapụ Doctor bụ a zuru okè ịba uru software maka ihichapụ ndị "ike ihichapụ" faịlụ ma ụfọdụ n'ime ya ọghọm hapụrụ ndị mmadụ na-eche ma e nwere ndị ọzọ kwesịrị ekwesị software n'ihi nzube a ma ọ bụ. E nwere ọtụtụ faịlụ ihichapụ software n'ihi na ma Mac na Windows n'elu ikpo okwu na ọ bụrụ na ị accidently ihichapụ ụfọdụ faịlụ, na Wondershare mgbake ngwá ọrụ bụ mgbe gị maka enyemaka!
Top 10 Adobe Premiere Ihe Alternatives
> Resource> Alternatives> Top 10 uzo ozo ka Hichapụ Doctor inye ọbụna mma arụmọrụ